Sweden ebilie na odida - Part 2 | Apg29
Sweden ebilie na odida - Part 2
Otu nwere ike ikwu na anyị nwetara ma Sweden mbili na ọdịda.
Alaeze Ukwu Rom bilie, na-ọdịda bụ a maara echiche. Ọ bụ ihe dị otú a alaeze ụwa wee bụrụ otú nnukwu na-achị, kamakwa banyere otú ọ mgbe dara.
Sweden na-agbanwe agbanwe, ọ bụ agaghịkwa ochie ndị mmadụ n'ụlọ.
The ndị mmadụ biliri si na mweda n'ala nke aṅụrụma na 1800s na ọdịmma ala na e kere n'oge 1900s, bụ a na-agba akaebe nke ihe nwere ike ime ka a na mba.
Adịbeghị anya, ọtụtụ, dị mwute ikwu, a na-agba akaebe ihe nwere ike bibie. The ntọala nke ọha mmadụ, alụmdi na nwunye e dochie rụrụ njikọ, agbajikwa ezinụlọ ụmụ agbanwerịta ibe ulo na iga dị iche iche ebe obibi.
The mma n'ihi na a ga-atụkwasịkwara ke akpa afọ ole na ole nke a ndụ nwa e maa jijiji. Ndị ọkachamara na-ekweta na mmalite afọ bụ isi ka a onye mmepe. Napụ ụmụ mma n'ala, e nwere oké ihe ize ndụ na ha na-aghọ nwedịrị ike ịta na obi erughị ala ndị mmadụ na-eme n'ọdịnihu.
Kwa afọ odika 50,000 ụmụaka ndị nne na nna 'ịgba alụkwaghịm. Ọ na-eme afọ mgbe afọ mgbe afọ na ewute elu nnukwu ọnyá na otu, nke dịghị akụ na ụba ụwa nwere ike ịgwọ. The ụmụ kere n'ime ihe mgbu nke siri ike na-agwọ ma a ọtụtụ ụmụaka bi na ajụjụ ma ọ bụ ha kpatara na ihe si gaara dị ka ha mere.
Alụmdi na nwunye bụ otu ndabere dị mkpa maka a kwụsiri ike. Ọzọ ndabere bụ na ị na-amụta ihe bụ ezi ihe na ihe ọjọọ. Ọ bụ kpam kpam dị oké mkpa maka a mmadụ ka ọrụ. Anyị na-ezo bụghị nanị iwu, kama ọ bụ na esịtidem compass - ụkpụrụ na-ezi, ma n'ihi na onye na ndị mmadụ gburugburu.
Chineke nyere ihe ndị dị mfe isi okwu ụmụ mmadụ, ha na-adịghị ọtụtụ, ha bụ nanị iri-na-ole. Ọ bụrụ na ndị anyị na ụwa dọọrọ ha ụwa ama kpamkpam dị iche iche!
Otu nwere ike ịjụ ihe ọjọọ na na atụ na-asọpụrụ nna ya na nne ya?
Ị ga-adịghị egbu - ọ bụ adịghị mma na-eme ka o doo anya na ya?
I gaghi-ezu ohi - otú idyllic ga-a ọha mmadụ ebe onye ọ bụla steals?
Ị ga akaebe ụgha megide onye agbata obi gị - ụgha na ebubo - otú ọtụtụ adịghị mebiri site ya?
Akwala iko - ọ dighi ezi ihe n'ụlọ ahịa otú ahụ!
Gịnị mere ndị dị otú ahụ na-eguzogide megide iwu nke Chineke bụ onye kasị mma?
Nnọọ na ị chọrọ ibi ndụ maka onwe gị
Ihe bụ isi na banyere ghara ịchọ-Chineke n'ime ndụ ha, ha dị nnọọ chọrọ onwe ha na ọ bụghị maka ikwere na otu Chineke. Ọ ga-emenye ihere nwere ịgụ na ya - ka anyị kwusi echiche banyere Chineke - ọtụtụ echiche na-arụ ọrụ maka.
N'etiti ndị mere ya, ọ bụ ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ndị kewapụrụ maka dechristianize Sweden. Karịsịa na '60s wee ihe rụrụ iji kpochapụ Christian nketa. Mgbe ahụ nakwa ekenịmde kasị aririọ rụrụ na mba anyị (1963); ndị bi na ama ahụ banyere 7.5 nde. N'ime ndị a, ka nde abụọ na otu narị puku (!), Ònye dere na isiokwu nke Christianity nchekwaba na ụlọ akwụkwọ!
Ma dịkọrọ ndụ ọchịchị n'ihi nke a oké nkwado maka idebe ozizi nke Kraịst na ụlọ akwụkwọ - ọ bụ ka pụọ. Nke a bụ nke kasị njọ mkpebi ndị ahụ ị dọọrọ a na mba!
Olee otú ọtụtụ ijeri na ọ nwere na-eri mmadụ, na otú ọtụtụ ihe rụrụ arụ ndị mmadụ na-enwe, na e nweghị data. On ụbọchị nke ikpe, niile agbalị ibibi ya pụta nke a wetaara ya, ọ puta ìhè.
The ọchịchị na adị mgbe e ghọọ ọgba aghara n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ. Students emegbu onye ọ bụla ọzọ ike, ụfọdụ họọrọ na-ndụ ya, ụmụ atọ a izu mere! Ndị ọzọ na-achọghị ka na-aga akwụkwọ na-enweghị truancy. Teachers egwu site ụmụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ pụta adawo sharply.
The ndị na-eche njọ
The ndị mmadụ na-ada ada, psychiatric clinics bụ ogologo queues na-agbalị inyere ndị mmadụ aka ná mkpa. Na a pịa ntọhapụ site 2015, anyị na-agụ:
"Na afọ 23, na ojiji nke psychotropic ọgwụ abawanyele n'ike n'ike n'etiti-eto eto. Kasị nnọọ ukwuu bụ ịrị elu nke antidepressants, nke ụba 140 n'ogige atụrụ n'etiti ndị inyom 15-19 afọ na 70 ugboro n'etiti mmadụ na otu afọ otu. "
Gbalịa ile ndị a ọdachi na ọnụ ọgụgụ 70 ugboro na 140 ugboro ntọt!
Ihe ọjọọ na-ewere n'elu na obodo: ime ihe ike n'okporo ámá, igbu ọchụ, rapes, ụgbọala setịpụrụ ọkụ. Na-eto eto na-omempụ ọbụna tupu ha okokụre akwụkwọ, anyị na-anụ banyere ikwa rụrụ site ụmụ. Na ụfọdụ agbata ike ụgbọ ihe mberede na ọkụ tinye enweghị uwe ojii iduga.
The eduga ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-echebe site na nche nche, obodo ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na egwu ọnwụ na mmadụ mgbasa ozi.
Villas na ụlọ ga-enweta irè mkpu na-achọghị ọbịa pụọ.
Sweden họọrọ na-eje ije site n'ebe Chineke - n'ihi na-agbalị ibibi.